SADC Yotarisirwa Kuudza Zimbabwe Mari Yaingakwanise Kuiwanira
Kurume 31, 2009
Executive Secretary weSADC, VaTomaz Salamao, vanoti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzinoda masvondo maviri kuti dzione kuti dzingabatsira Zimbabwe nemari yakawanda zvakadii. VaSalamao vakataura mashoko aya mushure memusangano weSADC wakaitirwa muSwaziland neMuvhuro.
Musangano uyu waive wekuzeya nzira dzekubatsira Zimbabwe, iyo iri kuda mari inosvika mabhiriyoni gumi emadhora ekuAmerica.
Zvichitevera musangano uyu, South Africa inonzi yati ichapa Zimbabwe mari inoita 300 million SA Rands, kana kuti US$30 million, iyo ichashandiswa mukubatsira bhajeti regore rino. Mari iyi inonzi ichapihwa bazi rezvemari.
Gurukota rezvemari, VaTendai Biti, vanoti vane chivimbo chekuti SADC ichaedza nepainogona napo kubatsira Zimbabwe, kunyange hazvo rubatsiro rukuru ruchitarisirwa kubva kunyika dzakabudirira.
Imwe mari inoita 500 million SA Rands, kana kuti US$50 million, ichapihwa sechikwereti chekubatsira makambani kuti atange kuita mabasa awo nemazvo.
Pamari iri kutsvagwa, Zimbabwe iri kuda rubatsiro rwemabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica nechimbichimbi, kuitira kuti ibve mumatadza eshumba mairi. Asi VaSalamao vakaburitsa pachena kuti mari yakawanda ichatarisirwa kubva kunyika dziri kunze kweSADC, dzakaita senyika dziri muEuropean Union, America nedzimwe nyika.
VaSalamao vakatiwo SADC ichaumba chikwata chichaenda kunotaura nenyika idzi, kuitira kuti dzibatsire Zimbabwe, kuti dzibvisewo zvirango zvinonzi zvakatemerwa hurumende yaVaMugabe.
Nyika zhinji dzakabaudirira dziri kuti dzicharamba dzichibatsira vanhu nezvekudya pamwe nemishonga, kwete zvekupa hurumende mari sezvo dziri kuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vari kuenderera mberi nemabasa avo ekudzvinyirira vanhu.
VaLuxon Zembe inyanzvi munyaya dzezvehupfumi. VaZembe vaudza Blessing Zulu weStudio7 kuti zvakakosha kuti Zimbabwe igadzirise maitiro ayo isati yapihwa mari.